Myanmar Monk Student Association: March 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ နည်းပညာဆိုင်ရာ |
စစ်တပ်ကို အင်အားတောင့်အောင် လုပ်မည်ဟု ဦးသိန်းစိန်ပြော
ဖနိဒါ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၂ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပထမဆုံးပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင် စစ်တပ်အင်အား တောင့်တင်းအောင် တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်း အလေးထား ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
“ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ သဘောထားကြရင် ခေတ်သစ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းမျိုနဲ့ တွေ့ကြုံကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထဝီဝင် အနေအထားရော၊ စီးပွားရေးအရပါ အချက်အချာကျတဲ့ မိမိတို့ နိုင်ငံသည် နယ်ချဲ့လက်သစ်တွေ ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ခြယ်လှယ်နေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေတာကို အားလုံး သဘောပေါက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အဆင့်မီ တပ်မတော်တရပ် ရှိဖို့လိုပါတယ်" ဟု အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။
၁၉ နှစ်ကြာ အတိုက်အခံများကို ဖိနှိပ်ကာ အုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အနားယူသွားသည့် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေ၏ လူယုံတဦးဟု လူသိများသော အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် ဦးသိန်းစိန်က နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အဦးတွင် ကြိုတင်ရေးသားလာခဲ့သော မိန့်ခွန်းကို ဖတ်ကြားသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး မတောင့်တင်းရင် သူတပါးရဲ့ အနိုင်ထက်ပြုကျင့်မှုကို ခံကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မင်း ကိုယ်ချင်း၊ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနဲ့ နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီပြီး နေလာခဲ့ကြတဲ့ လူမျိုးဘဝမှ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဇတ်သိမ်းခန်းမှာ နယ်ချဲ့လက်အောက်ကို လွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ ကျရောက်ရခြင်ဟာ ခေတ်မီတဲ့ တပ်မတော်တရပ် မရှိခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသိန်းစိန်က ပြောသည်။
“ လက်ရှိ တပ်မတော်ကို အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ တပ်မတော်၊ အစွမ်းအစရှိတဲ့ တပ်မတော်၊ ခေတ်မီတဲ့ တပ်မတော်၊ မျိုးချစ်စိတ် ထက်တန်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင် အားလုံးဝိုင်းပြီး တည်ဆောက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကို နိုင်ငံသားအားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီး တာဝန်ယူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းတွင် ပါရှိသည်။
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၏ စစ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးယူခဲ့သော ဦးသိန်းစိန်မှ စစ်အစိုးရကို ချီးမွမ်းစကားဆိုရာတွင် အဘက်ဘက်က ယိုယွင်းပျက်ဆီးနေသည့် နိုင်ငံကို အေးချမ်းသော ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်တည်ဆောက်ရန် အမွေခံကောင်းများ ပေးသွားခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြောကြားချက်တွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးရုံနှင့် မပြီးဘဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး အခြေခံကောင်းများ ပြုလုပ်ပေးရန်လိုသည်ဟု ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် အတိုက်အခံများကိုလည်း “ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဂုဏ်သရေ ကျဆင်းအောင် ပြုမူပြောဆိုခြင်း မပြုလုပ်ကြဖို့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် မပြုလုပ်ကြဖို့ လိုပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
“ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့ အညီ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို တရားနည်းလမ်းကျစွာနဲ့ ရယူကြမယ်ဆိုရင် သာဓု ခေါ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးကို ဖွင့်ထားပြီး လက်ကမ်းကြိုဆိုနေမှာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုသွားသည်။
သမ္မတက အစိုးရက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိသော ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးမည်ဟုလည်း နာရီဝက်ခန့်ကြာသော မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားသွားသည်။
အလုပ်သမားများအတွက် အနိမ့်ဆုံးလစာ သတ်မှတ်မှုကို မြှင့်တင်သွားမည်ဟု သဲလွန်စပေး ပြောကြားသွားပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်အောင် လုပ်မည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ထို့အပြင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို တားဆီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရာတွင် “ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုဟာ လူတဦးချင်း ထိခိုက်စေရုံ သာမက နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ အကူညီကို ရယူပြီး ထိရောက်စွာ တားဆီးသွားပါ့မယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများကို တိုင်းတာ၍ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်နေသော ယုံကြည်ရသည့် Transparency International ၏ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် တန်းတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အဆိုးရွားဆုံး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ထူပြောသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုးဆုံးနိုင်ငံမှာ ဆိုမာလီ ဖြစ်သည်။
သမ္မတက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အကျယ်တဝံ့ ပြောကြားသွားပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြောသွားသည်။
By မသင်းသီရိ အင်္ဂါ, 29 မတ် 2011
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျ ပျက်စီးသွားသည့် အဆောက်အဦးရှေ့မှ ဒုက္ခသည် သားအမိ။ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၁။
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းက ငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေမှာ သတင်းသွားယူကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို အာဏာပိုင်တွေက စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေ ရှိခဲ့သလို အပျက်အစီး များတဲ့နေရာ တချို့ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် မပေးတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တခါ ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်း သေဆုံးသူ စာရင်းကို အစိုးရ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြတဲ့ အတိုင်းသာ ရေးသားခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းက ငလျင်ဒဏ် အများဆုံး ခံခဲ့ရတဲ့ တာလေနဲ့ မိုင်းလင်းကျေးရွာဘက်က အပျက်အစီး သတင်းတွေကို သွားယူတဲ့အခါ မနေ့ မတ်လ ၂၈ ရက် တနင်္လာနေ့က သတင်းထောက်တချို့ကို အာဏာပိုင်တွေက စစ်ဆေးခဲ့တာမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တဦးက ပြောပါတယ်။
“ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ရိုက်တဲ့လူတွေ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ရိုက်တဲ့လူတွေကို သူတို့က ဘယ်သတင်းဌာနကလဲ၊ ဘယ်ဂျာနယ်ကလဲပေါ့၊ အထောက်အထား စာရွက်တွေ ပြခိုင်းတယ်။ အဲဒီလို စစ်တာဆေးတာ ရှိတယ်။ တာလေမြို့ထဲမှာ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး စစ်တယ်။ အခု ကယ်ဆယ်ရေး နေရာတွေ ဘာတွေကိုတော့ သိပ် သွားရိုက်လို့ မရဘူး။ သူတို့ တပ်က နေရာချထားတဲ့ နေရာတွေပေါ့။ အဲဒီနေရာတွေကိုတော့ သွားရိုက်လို့ မရဘူးဗျ။”
မနေ့ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က တိုင်းမှူးကလည်း အဲဒီနေရာတွေကို လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းက အပျက်အစီးတွေကိုလည်း ကြိုပြီးတော့ ဖယ်ရှားလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ကင်မရာပါတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို လုံခြုံရေးတွေက စစ်ဆေးခဲ့တာမျိုး ကြုံခဲ့ရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အဲဒီဒေသတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်လှုပ်တာလေးတွေကလည်း ရှိနေသေးတာမို့ ဒေသခံတွေဟာ အခုအချိန်ထိ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေ ရှိနေတာ သိရတယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာက ပြောပါတယ်။
“ကွင်းပြင်ဘက်ထွက်ပြီး ညဘက် အိပ်နေတဲ့ အနေအထား ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက် နေ့ခင်းမှာ ပြိုကျသွားတဲ့ အိမ်တွေဘာတွေ ရှင်းလင်းတာ ရှိပေမဲ့ ညနေစောင်းတာနဲ့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘဲနဲ့ တယောက်မှ မတွေ့ရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ် ခြောက်ကပ်သွားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။”
သူတို့ဂျာနယ်အတွက် သတင်းသွားယူနေတဲ့ သတင်းထောက်ရဲ့ ပြောပြချက် အရတော့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ဝေငှမှုမှာလည်း လူတိုင်းမရတဲ့ ပြဿနာမျိုး ကြုံနေရသလို အခုဆိုရင် ရာသီဥတု အေးတဲ့ဒဏ်ကို ငလျင်ဘေးသင့်သူတွေ ခံစားနေရတာမျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော့်သတင်းထောက် ပြောပြတာတော့ တချို့လူတွေ ကယ်ဆယ်ရေးကပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာ လာဝေတဲ့ အချိန်ကို မသိလိုက်ဘူးတဲ့၊ မမီလိုက်တော့ တချို့ လွတ်သွားတာတွေ မရခဲ့တာတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်းအေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟိုရက်တွေကတော့ မိုးလေး စိုစို ရွာပြီးတော့ အခု ဒီရက်ပိုင်းတော့ တော်တော်လေး အေးလာတော့ တချို့ ကွင်းပြင်ထဲ အိပ်တဲ့လူတွေမှာ နည်းနည်း အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။”
သတင်းဂျာနယ်တခုရဲ့ အယ်ဒီတာ ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တွေထဲမှာတော့ ငလျင်ဒဏ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပျက်အစီး ဓာတ်ပုံတွေကို အတော်လေး ဖော်ပြခွင့် ပေးခဲ့ပေမဲ့ သေဆုံးသူ စာရင်းမှာတော့ အစိုးရ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း အရေအတွက် ၇၀ ကျော်ကိုသာ ဖော်ပြခွင့် ရပြီးတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရေးသားခွင့် မပေးသလို သတင်းထောက်တွေကတော့ အဲဒီဒေသတွေမှာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသူပေါင်း ၁၀၀ မက ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
Windows7activator လေးပါ
ကျနော်ကြိုက်သော Windows7activator နောက်တစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် Windows7သက်တန်းကုန်နေလို့ သူတို့က လာလုပ်ခိုင်တယ် ကျနော်လည်း ဒီဟာနဲ့ပဲ ရှင်းပလိုက်တယ်။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ အလိုရှ်ိရင် ရအောင်ယူထားပေါဗျာ။
Windows7activator ဒေါင်းမယ်
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Tuesday, 29 March 2011
Download Program လေးပါ
ကျနော် Download Program လိုက်ရှာတော မောင်စေတာနာတို့ ညီနေမင်းတို့ ဆိုဒ်တွေမှာ သွားရှာပါတယ်။ တစ်ခါလေ့ကျရင် သူငယ်ချင်းတွေ Download မရှိဆိုပြီးတော computer တွေကို သယ်လာပြီးထည့်ကြတယ်။ သူတွေကတေ မထည့်တတ်ကြဘူးလေး။ မောင်စေတာနာတို့ ညီနေမင်းတို့ ဆိုဒ်မှာ တင်ထားပယ်မယ့် မထည့်တတ်ကျပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဗီယာနမ်က သူငယ်ချင်းက သူမှာ ရှိတယ်လို့ပြောတော ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ကျနော်သွားပြီး ယူလာတယ်. တော်တော်ကို အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ တစ်ခါထည့်လိုက်ရင် မပျက်တောဘူး။ ရောင်းရင်းတို့ကို ကျနော် မျှဝေလိုက်တာပါဗျာ။
ကျနော်ချစ်သော TuneUp Utilities Software
ကျနော်ကို သူငယ်ချင်းတွေက computer သန့်ရှင်းရေးအတွက် မင်းဘယ် Programကို အကြိူက်ဆုံးလည်းလို့ မေးကြတယ်။ ကျနော်တော ဒီ Program အကြိုက်ဆုံးလို့ ပြောလိုက်မယ်။ ဘယ်လို့လည်း ဆိုတော ကျနော်ထင်ထားတဲ့ ပုံကို မိတ်ဆွေတို့မြင်ရင် ဘယ်လောက်ထိ အသုံးဝင်သလည်းဆိုတာကို သိရမှာပါ။ ကျနော်တော အရမ်းကြိုက်တယ်။
ဒီပုံကတော computer ပွင့်လာတာနဲ့ Windown ကိုယ်စား ပေါ်လာမယ့်ပုံပါ။
ဒီပုံကတော Destop ကို ဘယ်လောက်ထိ ထားမလဲဆိုတာကို ကြိုက်သလို့ ထားနိူင်တဲ့ အနေထားကို ထားနိူင်ပါတယ်။
ဒီပုံကတော ဒီ Program တစ်ခုတည်း ပါဝင်တဲ့ Softwareလေးတွေကို သိအောင်တင်ထားပေးတာပါ။ ဒီ Program တစ်ခုမှာ Software tအခု၂၀ ကျော်တောင် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဟာကို သုံးမယ်ဆိုရင် တောင်တော်များများ Computer ကို သန့်ရှင်းတဲ့ Software ကိုတွေတောင် မလိုတောပါဘူး။ ဒီဟာတစ်ခုနဲ့တောင် လုံးလောက်ပြီးလို့တောင် ထင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ထိုင်းက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ထပ်ခေါ်ရန် စီစဉ်နေ
နိုင်ငံတွင်း တရားဝင် လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာ၊ လာအို နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများနှင့် မလုံ လောက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများမှ အလုပ်သမားများခေါ်ယူရန် ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက စီစဉ် နေသည်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတန်းအတွင်းဝန် စုမ်ကိယတ် ချာရာစီရိဝုန်(Somkiat Chayasriwong) က နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားရေးရာ ကော်မတီအနေနှင့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့် မြန်မာ၊ လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား အလုပ်သမားများ၏ နေရာ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားများကို အစားထိုး ခေါ်ယူလိုသည်ဟု ပြောကြောင်း ယနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံတကာသို့ အလုပ်သမား ၁၀ သန်းခန့် သွားရောက် လုပ်ကိုင် နေ သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအနေဖြင့် ထိုင်းသို့လည်း လာရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ အလုပ်သမားများကို ခေါ်ယူလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အလုပ်သမား လိုအပ်ချက် များ ဖြည့်ဆည်းပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ တရားမ၀င် အလုပ်သမား လျှော့ချနိုင်သည့်အတွက် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက မျှော်လင့်ထားကြောင်း သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများကို ခေါ်ယူသွားသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယခုခေါ်ယူမည့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများကို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် နှင့် အိမ်ဖော် လုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း သတင်းစာက ရေးသည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှု ကွန်ရက်(Action Network for Migrants)မှ အဒိစွန် ကေ့မုန်ကွန်လ် က ယခုရည်ရွယ် သည့် လုပ်ငန်ခွင်များ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားများက နှစ်သက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများ၌သာ လုပ်ကိုင်လိုကြကြောင်း ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းအစိုးရက မြန်မာအစိုးရထံသို့ တရားဝင် အလုပ်သမား တသိန်း လိုအပ်သည်ဟု အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း မြန်မာဘက်မှ ၁၈၀၃ ဦးသာ ပို့နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် အလုပ်သမား ပို့ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၌ ရှုပ်ထွေးမှု များ စွာရှိသည်ဟု စုမ်ကိယတ် ချာရာစီရိဝုန် က ဆိုသည်။
သတင်းစာ ၌ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်၍ အလုပ်လုပ်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများထဲမှ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား၂ သိန်းခန့်သည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိခဲ့၍ ၎င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ က အရေးယူရန် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
မြန်မာ အလုပ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်နေသူ Thai Action Committee for Democracy in Burma(TACDB)မှလက် ထောက် ဒါရိုက်တာ ဦးမြင့်ဝေက ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုးမှု ပျက်ကွက်ရခြင်းမှာ ထိုင်း အစိုးရ မူဝါဒ အားနည်းချက်များလည်း ပါဝင်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
“မြန်မာအလုပ်သမား၂ သိန်းလောက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ပျက်ကွက်ရတာဟာ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ ပေါ်လစီ အားနည်းချက်နဲ့ အလုပ်သမားရေးရာတွေကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးအောင် ဆောင်ရွက်ထားတာတွေကြောင့်လို့ ကျနော် ပြောချင်တယ်။ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်ယူတင်သွင်းမယ်လို့ စီစဉ်တယ် ဆိုတာ ကတော့ ဒီမှာရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက် လိုအပ်ချက်တွေကို မဖြေရှင်းပေးဘဲ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားတခုတည်းကိုပဲ ကြည့်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ စီမံချက် သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုင်း အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ကာ အလုပ်လုပ်နေသူ မြန်မာ အလုပ်သမား တသန်း သုံးသိန်းခန့်ထဲမှ တသန်းနှင့် တသိန်းခန့်သာ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ ရက်နေ့ သည် အလုပ်သမား လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန် နောက်ဆုံး သတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ စမွန်စခွန် ခရိုင်ရှိ ထိုင်းယူနီယံ ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ ကိုမျိုးကလည်း“ အခုအချိန်မှာ အလုပ် လျှောက်မယ်ဆိုရင် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် တောင်းတာ များတယ်လေ။ မရှိရင် အလုပ်လျှောက်ရတာ မလွယ်ဘူး။ ရဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမားလက်မှတ်တို့ ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ကို လူအများက လုပ်နေကြပါတယ်။မလုပ် ဘူး ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ အဓိကက ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့။ အခြားအကြောင်းလည်း ရှိတော့ ရှိမပေါ့”ဟု ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာအလုပ်သမား၂ သန်းခွဲမှ ၄ သန်းအထိ ရှိနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
How to do everything in Photoshop CS4
ကျနော် Adobe Photoshop CS4 စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုတော Adobe photoshop CS7 အထိ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမေပဲ့ ကျနော်အတွက် CS4က CS3,5,6 ထက် နည်းနည်း လွယ်ကူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကတော တူကြပါတယ် အနည်းငယ်သာ ကွာခြားတာပါ။ ကျနော်က Adobe PhotoshopCS4 ကိုလေ့ သင်တယ် စာအုပ်ကိုလည်း လေ့လာတယ်ဆိုတော ပိုပြီးတော နားလည်သွားတာပေါဗျာ။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ နည်းပညာစာအုပ်များ |
ကျနော်ချစ်သော Adobe Photoshop CS4 စာအုပ်
ကျနော် Adobe Photoshop CS4 စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုတော Adobe photoshop CS7 အထိ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမေပဲ့ ကျနော်အတွက် CS4က CS3,5,6 ထက် နည်းနည်း လွယ်ကူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကတော တူကြပါတယ် အနည်းငယ်သာ ကွာခြားတာပါ။ ကျနော်က Adobe Photoshop CS4 ကိုလေ့ သင်တယ် စာအုပ်ကိုလည်း လေ့လာတယ်ဆိုတော ပိုပြီးတော နားလည်သွားတာပေါဗျာ။
Adobe Photoshop CS4 ဒေါင်းရန်
ကျနော်ကြိုက်သော Windows7activator ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တော Windows7ပြဿနာဖြစ်လာရင် ဒီဟာနဲဘဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ်။ ကျနော်အားရင် တင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျ။
Adobe Indesign CSS5စာအုပ်လေးပါ
ကျနော် အရမ်းသဘောကျတဲ့ Adobe Indesign CSS5 စာအုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်က ထိုင်းနိူင်ငံကိုစရောက်တော Adobe page maker ကို သင်ချင်လို့ လိုက်ရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိူင်ငံက မြန်မာနိူင်ငံလို့ မြန်မာဆရာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ကိုလိုချင်တဲ့ နည်းပညာကို သင်ယူခွင့်နည်းပါးတာကြောင်း အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရမှာလားမသိဘူး ကျနော် computer သင်မယ်လို့ ရွယ်ရည်ပြီး ချင်းမိုင်မြို့မှာ လိုက်ရှာလိုက်တော MLC ဆိုပီ ဆရာဦးသိန်းလွင် တည်ထောင်တဲ့ Thanking classroom foundation. Migrant Learning Center အခမဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုရောက်သွားပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော Adobe page makerထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ Adobe In design CSS4 ဆရာကျော်ကျော်နဲ့ သင်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်ကို computer နည်းပညာကို စေတနာရှိ်ရှိနဲ့ အခြေခံ computer ပညာကို သင်ပေးတဲ့ ဆရာကျော်ဝင်းနဲ့ အဆင့်မြင့် computer ပညာကို သင်ပေးတဲ့ ဆ၇ာကျော်ကျော် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီစာအုပ်လေးကို ဒေါင်းပြီး လေ့လာနိူင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Doi Suthep ဘုရားသို့ အမှတ်တရ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည့် ချင်းမိုင်မြို့၏ အထင်ကရနေရာဖြစ်သော Doi Suthep ဘုရားသို့ အလည်ရောက်ခဲ့ MMSA ကျောင်းသားတချို့၏ အမှတ်တရာပုံများကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ အမှတ်တရများ |
သာသနာ့ဘောင်အတွင်းကနေဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားတွေးတောနေကြတာတွေကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ “For what do you do? To do for people and To do for Buddha Sasana” ပေါ့။ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေများစွာရှိနေပေမဲ့၊ မိမိဘာတွေစဉ်းစား၊စိတ်ကူး၊လုပ်မှာလဲဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။စိတ်ကူးနဲ့အကြံဥာဏ်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပြဖို့အတွက်၊စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားအကောင်အထည်ဖေါ်ထားတာတွေကို၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီး၊အကျိုးလိုလားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေနဲ့ ဆွေနွေးကိုင်ပင် နှီးနှောဖလှယ်ပြီး၊ အယူအဆ၊အခြေအနေတွေကို ဥာဏ်မှီသလောက် မေးလိုက်၊ဖြေလိုက်၊အမြင်ရှုထောင့်တွေနဲ့ပြောပြလိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊(သို့)၊လုပ်ကြပါ။လူငယ်လူရွယ်၊အမျိုးသား/အမျိုးသ္မီးတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ လူထုအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ မှီခိုရာ၊နေရာတစ်ခုအနေနဲုံ့ကြည်အသိမှတ်ပြုလာအောင်လုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းဝိုင်းအတွင်းမှာ လူငယ်လူရွယ်၊အမျိုးသား/အမျိုးသ္မီးတွေကို ယနေ့ခေတ် ပညာရေးစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပညာရေးကျောင်းထူထောင်ပြီး၊သူတို့တတွေကိုပညာသင်ပေးကြပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာထဲကို ကိုရင်၊သီလရှင်၊ရဟန်းဘဝကူးပြောင်းလာချင်သူတွေကို တက်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးပြီး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊အပြောအဆို၊နေပုံထိုင်ပုံတွေကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လာအောင် သင်ကြားပေးကြဖို့နဲ့၊အချို့သောအရာတွေကိုသီးခံကြိုးစားပြီးသင်ကြားပေးကြဖို့။
လူထုကိုသီးခံစည်းရုံးပြီး အုပ်စုများပြားလာအောင်လုပ်တာ၊လူထုရဲ့အင်အားနဲ့၊လူထုကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာထဲသို့ လူငယ်လူရွယ်တွေတိုးတက်များပြားလာတဲ့အခါမှာ၊လူတို့တွေရဲ့ ကာယအား၊ဥာဏအားတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူကြီး၊မိဘရွယ်အိုများ ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ လာရောက်နေထိုင်ပြီး၊ စိတ်ရော၊ကိုယ်ရော၊ငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို နာကြား၊မှတ်သား၊လိုက်နာကျင့်ကြံကာ နေသွားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးကြဖို့။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ဓမ္မနည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီး၊မိမိရဲ့စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရင်း၊အတ္တဟိတ၊ပရဟိတတွေကိုပြုလုပ်ပေးကါ၊တတ်နိုင်လာရင် ကမ္ဘာကြီးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စိတ်ကူးရှိနေပါတယ်၊(သို့)ရှိကြဖို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ချင်းမိုင်)နဲ့တွေဆိုစဉ် ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒ(ရွှေဘို) မှ အမှာစကား အနည်းငယ်ပြောသွားခြင်းကို ဖြည့်စွပ်တင်ပြလိုက်ခြင်းပါ။
"ရသစုံလီမြောက်ဦးမြီ" ဆိုပီတော ရခိုင်အသံနဲ့ ရေးထားတာကို မြင်ရမှာပါ။
ဗွီဒီယိုကတော ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးဘုရားတွေကို စုစည်းပြီး တင်ပြထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဗွီဒီယိုကဏ္ဍ |
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ သတင်းအထွေထွေ |
Bogus monks exploit Buddhism
* Published: 26/03/2011 at 12:00 AM
The presence of more than 300 foreign Buddhists ataBangkok temple has raised concerns that some might be bogus monks begging for money and preying on people.
Almost 300 foreign monks live in tents at Wat Talom in Bangkok’s Phasicharoen district where six Burmese monks,aMon monk andaCambodian novice were arrested on charges of illegal entry to the country last week. TAWATCHAI KEMGUMNERD
Officers from the Immigration Bureau, Thammasala police station and the National Buddhism Bureau inspected Wat Talom in Phasicharoen district early on March 17 following complaints that hundreds of foreign monks had sought shelter at the temple.
The team found about 300 monks and novices from various countries such as Sri Lanka, India, Bangladesh, Cambodia, Laos and Burma living in tents on the temple grounds.
Many had entered the country legally, with some carrying tourist visas and some using foreign students' visas.
Eight, including six Burmese monks, one ethnic Mon monk and one Cambodian novice, failed to produce travel documents and ordination certificates.
The eight were defrocked and sent to the Immigration Bureau on illegal entry charges.
Pol Col Chartchai Iamsaeng, deputy commander of the Immigration Bureau's investigation centre, who led the inspection, said members of the public had complained that many monks, thought not to be Thai nationals, lived in the temple and some went out in the afternoon to collect alms, which was against Buddhist teaching.
Phra Maha Boontheung Chutinatharo, abbot of Wat Talom, said the foreign monks had entered the country legally to study dhamma and some wanted to visit Thailand.
Many monks from overseas wanted to study here as Thailand was known for its Buddhism studies. "Residents living near the temple might not be aware that many monks staying at the temple are foreign monks who entered the country to study Buddhist teachings," said the abbot.
"Those foreign monks do not have the same custom of completing their alms-collecting by 10am, the way we do."
Nopparat Benjawattananan , director of the National Buddhism Bureau (NBB), said 1,057 foreign monks sought permission from his office to live in the kingdom last year.
Most came from Cambodia with 279, followed by Bangladesh 264, Nepal 131, Burma 104, Laos 46, China 34, Malaysia 33, Vietnam 29, the United States, 23, and Indonesia 18. The rest were from other countries, he said.
Thailand's reputation asahaven for Buddhist studies had opened the way for gangs to enter the country under the guise of being foreign monks, said the NBB director.
A source said Singapore and Malaysia had also grappled with problems of bogus monks begging for money.
Mr Nopparat said the NBB could not control foreign monks who had not registered with his agency.
Bogus monks had entered the country using tourist visas.
The NBB did not know how many foreign monks had entered the country. Foreigners wanting to study at Mahachulalongkornrajavidyalaya University or Mahamakut Buddhist University could directly seek permission from those two Buddhist universities.
Mr Nopparat said he would invite representatives from the two universities to discuss the registration of foreign monks with his agency to ensure better controls.
Kai (real name withheld), 40, who lives near Wat Talom, said most foreign monks had left the temple following news reports about their presence.
However, he believed some of the monks were still staying in the country, begging for money.
He said they would probably return to the temple after news about them faded away.
"The problem started about 10 years ago when the temple changed abbots," he said.
Boonchai Chuecharnwong,abusinessman in Bang Bua Thong area, condemned those who wore saffron robes to exploit Buddhism.
Monastic police patrol city
Many people know the city administration is responsible for ensuring the safety of Bangkok residents. Its city inspectors or thetsakit officials are assigned to help police guard the city.
But onlyafew people know about the monastic police whose task is to protect Buddhism.
The National Buddhism Bureau formedagroup of officials to monitor the wayward activities of Buddhist monks in Bangkok and surrounding provincesalong time ago.
The monastic police look for monks who fail to adhere to their vows or are involved in disciplinary or legal wrongdoing and report their misconduct to the bureau. The bureau will alert the police, who apprehend the monks, said Udom Songkhajorn,abureau official.
There are about 15 monastic police officers in Bangkok. The officials are divided into four teams.
The duties of the monastic police are similar to those of thetsakit officials as they have no authority to make arrests. They only pass on information as whistleblowers.
Monks accused of breaching Buddhist teachings or involved in wrongdoing will be investigated byapanel of monks. If there isabasis to the accusation, the monks will be defrocked.
Mr Udom said cases against wayward monks in the provinces would be handled by provincial Buddhism offices.
မြန်မာဒုက္ခသည်များအား တတိယနိုင်ငံထွက်ခွာခွင့် ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ
မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ ခိုလှုံခွင့် ရရှိဖို့ လျှောက်ထားသူ တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ
ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးရှိနေတာကြောင့် ဒုက္ခသည် ပြဿနာဟာ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်နေပြီးတော့ တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာမယ့်
သူတွေကိုတောင် သူတို့တွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်းပဲ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီိလုိ့ အမေရိ ကန် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဌာန (The US Department of Homeland Security) က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လေ့လာမှုတွေဟာ အောက်ခြေသိမ်းအဆင့်ထိ တောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေပြီ လို့လည်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ထွက်ခွာခွင့် ရုပ်သိမ်း မှုတွေဟာ ၀ါရှင်တန်ကို တိုက်ရိုက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ် ရေး ကော်မတီ (IRC) နဲ့ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်း (IOM) တို့က အရာရှိကြီးတွေတောင် မသိကြသေး ဘဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို သေသေချာချာ မရှင်းပြနိုင်သေးပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေက စပြီးတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာကြ မယ့် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခ သည်တွေရဲ့ ထွက်ခွာမှုအတွက် ဖျက်သိမ်းမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြန်လည် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်နေကြပါ တယ်။ တချို့သော IOM ဌာနက အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက သူတို့ဌာနမှာ ရှိနေကြတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်း တွေဟာ ဒီကိစ္စကို အချိန်မှီ သတင်းပေးသင့်တယ်လို့လည်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ကလို (မတ်လ – ၇ ရက်) မလေးရှား UNHCR ရုံးကနေ လေဆိပ်ကို သွားဖို့ ကားပေါ်ရောက်ပြီး မှ သူတို့ရဲ့ ထွက်ခွာမှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူး။ ဒါဟာ ၀ါရှင်တန်ကနေ သတင်းပေး ပို့မှုတွေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ IOM ဌာနမှ သေချာစွာ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
UNHCR- IRC ဌာနရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မလေးရှားနိုင်ငံက တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာဖို့ အတည်ပြုပြီးတဲ့ ဒုက္ခ သည် ၇၅၀ ဦးတိတိဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးအရ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ဖို့ ထပ်မံလိုအပ်နေတဲ့အတွက် ဖျက်သိမ်းခြင်း ကို ခံလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပုံမှန်အနေအထားကို ပြန်ရောက်ဖို့ ဘယ်လောက် အချိန်ယူရမလဲ ဆိုတာမသိရှိ ရသေးပါဘူး။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေကြတဲ့ တတိယနိုင်ငံကို ထွက်ခွာဖို့ အတည်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခသည် ၈၅၀ ဦးတိတိဟာ လည်း ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ မသေမချာ မရေရာမှု တွေနဲ့ အတူ ဒီပြသနာကို ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
အခုလို ထွက်ခွာခွင့် ရုပ်သိမ်းခံရတာဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေ သက်သက်ပါလို့ သိရှိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ဖျက်သိမ်းခြင်း ခံလိုက်ရတဲ့ အထဲမှာ ပါတဲ့ တစ်ဦးက ခုလို ပြောပါတယ်။
“ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အထဲမှာ ကျနော်တို့ အသုတ်က ဆယ့်နှစ်မှု ပါဝင်ပြီးတော့ ၁၅ မှုကတော့ လွတ်သွားပါတယ်။
လေဆိပ်ကိုသွားမယ့် ကားပေါ် ရောက်ပြီးမှ သူတို့ ထွက်ခွာမှုကို ဖျက်သိမ်း တယ်လို့ လာပြောတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ဟာ အရမ်းတုန် လှုပ် သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ခဏကြာတော့ IRC က အရာရှိကြီးတွေ ရောက်လာပြီး
“ ဒါဟာ မလေးရှားက ကျနော်တို့ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မှာ ဒီလိုမျိုး လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ၀ါရှင်တန်ကနေပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးအရ ထပ်ပြီးတော့ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ဖို့ အမိန့်ပေးလာတာကြောင့်ပါ”
လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ သူက တဆင့် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့သော ဒုက္ခသည် မိသားစုတွေဟာ မလေးရှားမှာ ဆက်လက် နေထိုင်ဖို့အတွက် အရမ်းခက်ခဲနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ နေအိမ်တိုက်ခန်းတွေဟာ ပိုင်ရှင်တွေဆီ ပြန်အပ်ပြီး ထားပါပြီ။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်း အခြားသော သူငယ်ချင်းတွေကို ရောင်းချ ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“အခု လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေကလွဲပြီး မှီခိုနေထိုင်ဖို့ နည်းလမ်းက ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်း မရှိတော့ပါဘူး” လို့ ထွက်ခွာခွင့် ရုပ်သိမ်းခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mr. Henry Sui Hmung က ပြောပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ခရီးသွားလာရေး စရိတ်အတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတွေကို ရရှိဖို့ အတွက် တောင်းဆိုခဲ့တာကောင် မရရှိခဲ့ကြဘူး လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရုံးကနေပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေကို သက်ညှာစွာနဲ့ သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ဟာ တခုခု ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
သို့သော်ငြားလည်း သူတို့အတွက် ဆွေမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် ဖုန်းခေါ် အကြောင်းကြားပေးဖို့ အတွက်
လောက်သာ IOM ဌာနအနေနဲ့ အကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မလေးရှားမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးချင်းစီ
အတွက် ဒီကိစ္စဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ တရပ်ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Zomi Daily News
Email မှာ ပေးပို့လာသောစာကို
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Saturday, 26 March 2011
Internet မှ နိုင်ငံခြားCall ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကန့်သတ်ပြီ
မင်းနိုင်သူ Friday, 25 March 2011 17:09
မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်သမားများအား ခေတ်ကာလနှင့် လျော်ညီသော အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (WFSLB) က ယနေ့ တောင်းဆို လိုက်သည်။
WFSLB မှ ကိုကံကြီးမောင်က “မြန်မာနိုင်ငံမှာက စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားတွေအတွက် အနိမ့်ဆုံးလစာ သတ်မှတ်ချက် မရှိသေးဘူး။ အခုချိန်မှာ ဆန်တပြည် ကျပ် ၁ ထောင် အထက်မှာ ရှိနေတယ်။ အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့ လုပ်ခက တရက်မှ ၁၀၀၀ ကျပ် လောက်ပဲ ရနေတော့ လုံးဝ အဆင်မပြေကြဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ ခေတ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့ အနိမ့်ဆုံး လစာ နှုန်းထားတွေ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဒီနေ့ ကြေညာချက်ထုတ် တောင်းဆိုရတာပါ” ဟု ပြောသည်။
အချက် ၇ ချက်ပါ WFSLB ၏ ကြေညာချက်တွင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမား တဦးအတွက် တလလျှင် အနိမ့်ဆုံးလစာ ၁၆၆ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၁ သိန်းခွဲကျော်)၊ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ၆၁ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၆ သောင်းဝန်းကျင်)၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ၄၃ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၄ သောင်းကျော်) နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၁၂၃ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၁ သိန်းကျော်) ရနေချိန်၌ မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ လစာမှာ ၁၀ ဒေါ်လာ (ကျပ် ၁ သောင်း) နှင့် ဒေါ်လာ ၂၀ (ကျပ် ၂ သောင်း) ကြားတွင်သာ ရရှိ နေကြောင်းလည်း နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြထားသည်။
“မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ အနည်းဆုံးလုပ်ခ လစာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေ ကြရတဲ့အပြင် နေထိုင်မကောင်းလို့၊ သာရေး နာရေး ရှိလို့ အလုပ်မဆင်းနိုင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာလည်း အလုပ်ရှင်ရဲ့ မတရား လစာ ဖြတ်တောက်ခြင်းတွေကို ခံနေကြရတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တလ ၅၀၀၀၀ ကျပ်ရတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမ တယောက်ဟာ တရက်ပျက်မိရင်ကို ၅၀၀၀ ကျပ် အဖြတ် ခံရတာမျိုးတွေ ရှိနေတယ်” ဟု ကိုကံကြီးမောင်က ရှင်းလင်း ပြောပြသည်။
မြန်မာ အစိုးရသစ်၏ သမ္မတဖြစ်လာမည့် ဦးသိန်းစိန်အတွက် တလလျှင် လစာငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀၊ ကား ၆ စီး၊ ဒရိုင်ဘာ ၆ ယောက် အပါအ၀င် ခံစားခွင့်များစွာ ပေးထားကြောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရ၀န်ထမ်းတဦး၏ အနိမ့်ဆုံး လစာမှာ ၃၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် စက်မှုဇုန် လုပ်သားတဦး၏ ပျမ်းမျှလစာမှာ ၁၂၀၀၀ ကျပ် ၀န်းကျင်သာ ရရှိကြောင်း၊ သမ္မတလစာသည် စက်မှုဇုန် အလုပ်သမားတဦး လစာထက် ၄၁၆ ဆနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းငယ် တဦး၏ လစာထက် ၁၆၆ ဆအထိ မြင့်မားနေကြောင်းလည်း ကြေညာချက်တွင် ထောက်ပြ ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှ စတင်ကာ အလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှုများ မြင့်မားလာခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ လုပ်အားခ တိုးမြှင့်ပေးရေးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ရရှိရေးကို စက်မှုဇုန်လုပ်သားများက တောင်းဆိုနေရဆဲ ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ တရုတ်လူမျိုးပိုင် “တိုင်ယီ” (Taiyi) ဖိနပ်စက်ရုံ၌ အလုပ်သမား ၁၇၀၀ ကျော်တို့က အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့်များ တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
“အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဘန်ကောက်မြို့နားက အလုပ်သမားတွေဟာ တရက်ကို အနိမ့်ဆုံး ၂၂၀ ဘတ် (ကျပ် ၆ ထောင်ကျော်) ရရမယ်၊ မဲဆောက်မှာဆို အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ဘယ်လောက် ရှိရမယ် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိတယ်။ ဒီမှာက ဒါမျိုး လုံးဝမရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ တောင်းဆို နေရတာဖြစ်တယ်” ဟု ကိုကံကြီးမောင်က ပြောသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Friday, 25 March 2011
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း လွယ်မွေဒေသကို ဗဟိုပြု၍ ယမန်နေ့ညက လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ပြင်းအား ၇ ရစ်ချတ်တာ စကေးရှိ ငလျင်ကြောင့် လူ ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များက ပြောသည်။
ငလျင် ဗဟိုချက်ပြုရာ ဒေသမြေပုံ (AP)
ငလျင်သည် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီ ခွဲခန့်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အနီးအနားတ၀ိုက်ရှိ တာချီလိတ်၊ တာလေ၊ မိုင်းလင်း စသည့် မြို့များတွင် ထိခိုက်သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ မီဒီယာများကမူ ယနေ့ မွန်းလွဲအထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၇၄ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၁၁၁ ဦး၊ အိမ်ခြေပေါင်း ၃၉၀၊ ဘုန်ကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး ၉ လုံးလည်း ပျက်စီးကြောင်း ကြေညာသည်။
သို့သော် အတည်မပြုနိုင်သေးသော ဒေသသတင်းများအရ တာလေမြို့နယ် တမြို့နယ်တည်းတွင်ပင် သေဆုံးသူ ၁၂၀ ခန့်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တာလေမြို့ခံတဦး၏က အိမ်များမှာ ရှေးအိမ်အို အိမ်ဟောင်းဖြစ်သည့်အတွက် သေဆုံးသူ အများအပြားရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တာလေမြို့နယ် ဆေးရုံလည်း ပျက်စီးသွားပြီး တာလေ အခြေစိုက် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၁၆ တွင်မူ စစ်တန်းလျား ပြိုကျ၍ ၁၇ ဦးသေဆုံးကြောင်း ဧရာဝတီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တာလေနှင့် တာချီလိတ်အကြား ဆက်သွယ်ထားသည် တံတားတစင်းလည်း ကျွံကျ ပျက်စီးသွားကာ ကားအသွားအလာ ရပ်ဆိုင်းသွားသည့်အတွက် ဒဏ်ရရှိသည့် လူနာများကို တဖြည်ဖြည်းချင်း တာချီလိတ် ဆေးရုံသို့ ပို့နေကြောင်း ဒေသခံတဦးက ဆိုသည်။
ထိုဒေသမှ ပြည်သူများမှာ ငလျင် နောက်ဆက်တွဲ လှုပ်ခတ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာလေ၊ တာချီလိတ်သွား ကားလမ်းကို စစ်တပ်က လုံခြုံရေး အပြည့်ယူထားလိုက်ပြီး ခရီးသွားလာမှုများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့တွင် ထရန်စဖော်မာ နှစ်လုံးပျက်စီးသွားသည့်အတွက် တချို့သောရပ်ကွက်များတွင် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်သွားကြောင်း၊ ပျက်စီးမှု အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်အသေးစားများကြောင့် လူအများမှာ အဆောက်အဦးများ၊ မီးကြိုးများနှင့် လွတ်ကင်းရာ လမ်းမများပေါ်နှင့် ဘောလုံးကွင်းအတွင်း၌ ညအိပ်ခဲ့ရကြောင်း တာချီလိတ်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင်ပါ ငလျင်ဒဏ် ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ငလျင်လေ့လာရေး ဌာနကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်မြို့ မြောက်ဖက် ၆၉ မိုင်အကွာရှိ ဒေသကို ဗဟိုပြုကာ အားပြင်းသည့် ငလျင် ၂ ခု လှုပ်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး မြို့တော် ဘန်ကောက်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့တော် ဟနွိုင်းရှိ ပြည်သူများ လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်ပြေးကြကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းကပင် ဂျပန်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဒေသတွင် ပြင်းအား ၈.၉ မဂ္ဂနီကျု အဆင့်ရှိ တိုဟိုကု (Tohoku) ငလျင်ကြီးကြောင့် ၄ ထပ် အဆောက်အအုံအမြင့်ခန့် မြင့်မားသည့် ဆူနာမီရေလှိုင်းကြီးများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင် ကြီးမားလှသော ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ၊ အသေအပျောက်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆူနာမီ ရေလှိုင်းကြီးများကြောင့် ရှင်ဒိုင်းမြို့တွင် လူပေါင်း သောင်းချီသေဆုံးခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများပါ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်ငလျင် မတိုင်မီတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တို့၌ ပြင်းအား ၅.၄ ရှိ ငလျင်ကြောင့် စူပါမားကတ်၊ ဟိုတယ်နှင့် အိမ်များပြိုကျရာမှ ၁၄ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းရှိ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ ဒုတိယ အကြီးဆုံးမြို့တော် ခရစ္စချာ့ခ်ျတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ပြင်းအား ၆.၃ အဆင့်ရှိ ငလျင်ကြောင့် ၇၅ ဦးသေဆုံးကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံဖိုးခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ကိုင်း ငလျင်ကြော၊ ဂွေးချို ငလျင်ကြော၊ မိုးမိတ် ငလျင်ကြော၊ ကဘော် ငလျင်ကြော၊ မြောက်ဦး ငလျင်ကြော၊ ကျောက်ကြမ်း ငလျင်ကြော၊ ဖာပွန် ငလျင်ကြောနှင့် ဘုရားသုံးဆူ ငလျင်ကြော တို့ရှိပြီး အကြီးအကျယ်ဆုံး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်များမှာ ၁၈၃၉ ခုနှစ်တွင် လှုပ်ခတ်သည့် အင်းဝငလျင်၊ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် လှုပ်ခတ်သည့် ပဲခူးငလျင်၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ အကြိမ် လှုပ်ခတ်သည့် ပဲခူးငလျင်၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လှုပ်ခတ်သည့် ပုဂံငလျင်တို့သည် အပျက်အစီး အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည်။
Burma's Lost Kingdoms စာအုပ်ကို ရေးသားသူ
Pamela GutmanPamela Gutman
Harold White Fellowship Research Topic :
Bloomsbury in Burma:abiography of Gordon Hannington Luce.
In 1980 the Library acquired the collection of Professor Luce, regarded as the foremost European scholar on Burma. This collection and others within NLA are key source materials for the biography.
Pamela Gutman is an Honorary Associate in the Department of Art History and Theory at the University of Sydney. She hasaPhD from ANU (1977) and has previously worked inanumber of academic and government organisations, including the Faculty of Asian Studies, ANU and the Department of Prime Minister and Cabinet, and wasamember of hte Refugee Review Tribunal. In 1974 she spent some time working with the late Professor Luce in Jersey, UK.
Information about the Luce collection and the Burmese collection at the NLA
Gutman, Pamela. Burma's lost kingdoms: splendours of Arakan. Bangkok : Orchid Press, 2001 (also Allen & Unwin, 2001). (description and contents list )
Gutman, Pamela. (2001). The martaban trade: An examination of the literature from the seventh century until the eighteenth century. Asian perspectives: (Honolulu) 40(1): 108-118.
Gutman, Pamela. Ancient Arakan : with special reference to its cultural history between the 5th and 11th centuries. PhD Thesis, ANU, 1977.
Hudson, R. and Gutman, Pamela. (2004). The archaeology of the early Buddhist Kingdoms of Thailand. In: Ian Glover and Peter Bellwood (eds). Southeast Asia: from prehistory to history. London: RoutledgeCurzon.
Gutman, Pamela. (2002). A Burma origin for the Sukhothai walking Buddha. In: Alexandra Green and T.Ruchard Blurton (eds). Burma: art and archaeology. London: The British Museum Press.
Gutman, Pamela. (2001). The Martaban trade: an examination of the literature from the seventh century until the eighteenth century. (pottery tradition in Lower Burma). Asian perspectives: the journal of archaeology for Asia and the Pacific. 40(1): 108-118. (abstract)
Gutman, Pamela. (1998). Between India and Southeast Asia: Arakan, Burma's forgotten kingdom. TAASA Review 7(4)
Burma's lost kingdoms စာအုပ်အကြောင်း
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Thursday, 24 March 2011
Earthquake hits Myanmar near China and Thailand borders
Were you affectecd by the earthquake in Myanmar? Share images, video and information with CNN's iReport. Don't do anything that could put you at risk.
(CNN) -- A powerful earthquake hit Myanmar Thursday near its borders with China, Thailand and Laos, the U.S. Geological Survey said.
It wasarelatively shallow quake, which can be very destructive.
The Geological Survey initially said the quake hadadepth of 142 miles (230km), but it later revised its estimate to say the quake was6miles (10 km) deep, putting it fairly close to the surface.
The center of the quake was 589 km (365 miles) northeast of Rangoon, the capital of Myanmar, and 772 km (479 miles) north of Bangkok, Thailand.
It was 104 miles (168 km) south-southwest of Yunjinghong, Yunnan, China.
A destructive tsunami is not expected, the Pacific Tsunami Warning Center said. In advice to government agencies, the center said the quake "is located too far inland and too deep inside the earth to generateatsunami in the Indian Ocean."
The quake was significantly less powerful than the one that hit Japan two weeks ago, causingatsunami, leaving thousands dead or missing, and prompting fears ofanuclear meltdown.
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည့် (ချင်းမိုင်)ခေါ် ဇင်းမယ်မြို့တွင် ယနေ့ညပိုင်း ၉ နာရီအချိန်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။
သိပ်တော့မပြင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဦးဇင်းတို့ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျောင်းတက်နေတာ သုံးနှစ်တာကာလမှာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့အတွက် ငလျင်လုပ်တယ်လို့ သိတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ပြီးတော ဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဦးဇင်းတွေကတော သုံးဆင့်အဆောင်ထက်က အောက်ကိုဆင်းပြီးတော ဖုန်းတွေနဲ့ အသိပေးကြပါတယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ရတာတော စိုးရိမ်သံတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် တကာမတွေကို ဖုန်းဆက်အသိပေးနေတာတွေကိုလည်း သိရပါတယ်။ ငလျင်လှုပ်သွားပြီးတာနဲ့ ဦးဇင်းတို့က အခန့်မှာ တွီဗွီကိုဖွင့်ပြီးတော ကြည့်ကြတဲ့အခါ ထိုင်းတီဗွီမှာကြာ်ငြာတဲ့အတိုင်းပြောရရင် မြန်မာပြည်နဲ့ ၆၅ ကီလိုမီတာမှာစလှုတ်သွားလို့ပြောပါတယ်။
မယ်ဆိုင်၊ ချင်းရိုင်၊ချင်းမိုင်၊ လန်ပန်တို့မှာလည်း ၂ကြိမ်ခန့်လှုတ်ပြီး လူအသေပျောက်ကိုတော့မသိရသေးပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် သတိထားပြီးနေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းတီဗွီလိုင်းနံပါတ် ၁ နဲ့ ၃တွင်သတင်းကြေငြာသွားပါသည်။
၁.အခြေအနေက ပေးတဲ့ အသိကို အသုံးချနိုင်တဲ့ အသိဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ။
၂.အရွယ်ချင်း မတူရင်... နေရာချင်း မတူရင်... အဖြစ်ချင်း မတူရင်... အသိချင်း မတူနိုင်ပါဘူး၊ ဒါလေးတော့ နားလည်သင့်တာပေ့ါ။
၃.စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ထုံးစမ်မရှိပေမယ့် ဖြစ်အောင်တော့ နေကြရမှာပဲ။ အဲ့ဒါမှ အရည်အချင်း။
၄.မသင့်တော်တဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့ရင်တောင်မှ သင့်တော်တဲ့ အကျင့်တွေ မဖျောက်ပစ်ပါနဲ့။
၅.မင်းလိုပါပဲ၊ သူတို့ပြောတာသာ အဟုတ်၊ သူတို့လုပ်တာသာ အမှန်၊ သူတို့ကြံတာသာ အကောင်း၊ ထင်နေကြတယ်။
၆.ပညာဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။ ပညာရှိချင်တာလား? ပညာပြချင်တာလား? နည်းနည်းတော့ သတိထားပါဦး။
၇.ငယ်တုန်းက ထမင်းကို ၀ါးပြီး ခွံ့ခဲ့တာ ကောင်းပေမယ့် ကြီးလာတဲ့အခါ အံဖတ်တွေ ထင်တတ်တယ်။
၈.မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေဟာ ပျာယာမခပ်ကြတော့ပါဘူး။ တစ်ချို့က ပျာယာခပ်နေရတာကို ကျေနပ်နေကြတယ်။
၉.အလိုက် မသိတတ်သူ တစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ပါ အလိုက်မသိတဲ့သူ အဖြစ်မခံပါနဲ့။
၁၀.ကဲ့ရဲ့စရာတွေ့ရင် ပါးစပ်ကို တတွတ်တွတ်နဲ့ အမြဲဖွင့်တတ်ပေမယ့် ချီးမွမ်းစရာကြုံရင် သော့ခတ်ပြီး အသေပိတ်ထားတတ်တယ်။
၁၁.မူရင်း ကောင်းမှ၊ မိတ္တူ ကောင်းမယ်။
၁၂.သူများတွေ ဖတ်ချင်သလို ဖတ်ကြပါစေ၊ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္တုပတ္တိက အမှန်အတိုင်း ကောင်းဖို့လိုတယ်။ သူတို့ အကြိုက် လိုက်ပြီးမရေးပါနဲ့။
၁၃.သနားစရာကို သနားတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ၊ ဟန်ဆောင်တာကို မသိရင် လူညံ့ဖြစ်သွားပြီ။
၁၄.“အားလုံးကို သိပါတယ်” လို့ ပြောပေမယ့် မဟုတ်တာတွေကို အဟုတ်လို့ သိနေခဲ့ရင် အလကားပါပဲ။
၁၅.စုပြီး... ဆုံပြီး... ရှင်းလင်းကြတာက စုဆုံပြီး ငြင်းကြတာထက် အကျိုးကောင်းတွေ များပါတယ်။
၁၆.အလုပ်မှာ မပျော်ရင် မအောင်မြင်နိုင်ဘူး၊ ပျော်လွန်းရင်လည်း အလုပ် မဖြစ်တာတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။
၁၇.လေကြောင့် ပျံသန်းနိုင်တဲ့ငှက်ဟာ လေရှိမှန်း မသိကြသလို၊ ရေကြောင့် ကူးခပ်နိုင်တဲ့ငါးဟာ ရေရှိမှန်း မသိကြသလို၊ ဓမ္မ၊ အဓမ္မကြောင့် ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး ဖြစ်နေတဲ့သတ္တ၀ါတွေဟာလည်း ဓမ္မ၊ အဓမ္မကို ရှိမှန်း မသိကြပါဘူး။
၁၈.သူတစ်ပါး လဲနေလို့ ထူပေးတာဟာ ကောင်းတဲ့စိတ်ပါ၊ ကိုယ် ချော်လဲနေတာကိုလည်း ရပ်နိုင်အောင် အရင်အားမွေးပါဦး။
၁၉.ကြိုးစားနေကြတာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူဥေးဖြစ်ဖို့ပဲ မနေမနား ကြိုးစားကြတယ်၊ ချမ်းသာအောင် မလုပ်ကြဘူး။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Tuesday, 22 March 2011
ကိုဝိုင်း | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၂၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၆ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ငလျင်နှင့် ဆူနာမိဒဏ် ပြင်းထန်စွာ ခံခဲ့ရသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုဟိုးကုကျွန်း Tohoku ၌ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄ ဦးခန့်သာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ကြောင်း တိုကျိုမြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်ပြည်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်းက ပြောသည်။
မတ်လ ၁၁ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ၈.၉ ရစ်ခ်ျတာစကေး ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဆူနာမီရေလှိုင်းများပါ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ၊ ဂျပန်သတင်းများအရ သေကြေပျောက်ဆုံးသူ ၁၈ဝဝဝ ဦးရှိပြီး ဖူကူရှီးမားဒေသတွင်လည်း နျူကလီးယားစက်ရုံမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဓာတ်ရောင်ခြည်များ ယိုထွက်နေသဖြင့် ၎င်းဒေသတွင်းမှ ဒေသခံများလည်း ကင်းလွတ်ရာ ဒေသများသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ဝဝဝ ကျော်ရှိကြောင်း ဦးတင်ဝင်းက ခန့်မှန်းသည်။ ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် တိုကျိုမြို့ အခြေအနေကို သိနိုင်ရန် မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုဝိုင်းက ဦးတင်ဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာ မြန်မာဘယ်လောက်ရှိပြီး၊ ဆူနာမီထိသွားတဲ့ ဒေသမှာရော ဘယ်လောက်ရှိလဲဗျ။
“ဂျပန်အစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်အရ ဗမာက ၇၈ဝဝ ကျော်လောက် ရှိတယ်၊ တရားဝင်ပေါ့။ အိုဗာစတေးက ၅ဝဝ လောက်ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၈ဝဝဝ ကျော်ကျော်လေးပေါ့။ အဲဒီထဲက ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က မဟာတိုကျို ဧရိယာမှာ နေတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးက နာဂိုယာမှာ ၃ဝဝ ဝန်းကျင်။ တခြားမှာ နည်းနည်းလေးပါ။ အဲဒီလူတွေကလည်း ဆက်သွယ်ရသလောက် အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ မနေ့ကတောင် ကျနော်တို့ဆီ ဂျပန်သတင်းထောက်တယောက် လာတော့၊ ကျနော်တို့မေးရင် သံရုံးက မဖြေဘူးလေ။ သူ့ကို ဖုန်းဆက်မေးခိုင်းတယ်။ လူအသေအပျောက် ဗမာစာရင်း ရှိလားလို့။ သံရုံးမှာလည်း အသေအပျောက်စာရင်း မရဘူး ပြောတယ်။ မရှိသလောက်ပါ။ မရှိဘူးလို့ ကံသေကံမ မပြောနိုင်တာက သက်ဆိုင်ရာက မရောက်သေးတဲ့ နေရာတွေ ရှိသေးတယ်လေ’’
ဘယ်နေရာကို အဓိက ထိသွားတာလဲ။
“အဓိကထိသွားတဲ့ တိုဟိုးကုကျွန်းဆိုတာက လူဦးရေ အနည်းဆုံးနေရာဗျ။ အဲဒီမှာက ဗမာက ၁၄ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ ပါမောက္ခတချို့ ရှိတယ်။ အများစုက ပြန်ကုန်ပြီ။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ငါးလုပ်ငန်းရယ် အဓိကရှိတယ်။ သူက ဂျပန်မြောက်ဘက်မှာ။ အရှေ့နဲ့ အနောက်ခြမ်း နှစ်ခြမ်းရှိတယ်။ အခုဖြစ်တာက အရှေ့ခြမ်း၊ အီဝါးတီးခရိုင်ပေါ့။ သူ့အောက်မှာ မီယာဂီခရိုင်၊ သူ့အောက်မှာ ဖူကူရှီးမားခရိုင် အဓိက အခု နျူကလီးယားပြဿနာ တက်နေတဲ့ နေရာပေါ့။ တိုကျိုနဲ့ ကီလိုမီတာ ၂ဝဝ ကျော်လောက် ဝေးတယ်။ တိုကျိုက တောင်ဘက်မှာပေါ့။ တချို့ဗမာတွေက ဟိုးတောင်ဘက် နာဂိုရာ၊ ကျိုတို၊ အိုတာကာတို့အထိ ရှောင်သွားတာရှိတယ်’’
“မီယာဂီခရိုင်က အဓိက။ သူက ငလျင်စင်တာနဲ့ နီးတာကိုး။ အဲဒီမှာ ဂျပန်မှာ နံပါတ် ၅ လောက်ရှိတဲ့ စန်းဒိုင်းမြို့ Sendai က ဘူတာတွေဘာတွေဆို ရေအောက်ရောက်သွားတာ။ လေဆိပ်ကြီးတခုလုံး ရေအောက်မှာ။ သူက တိုဟိုးကုကျွန်း အရှေ့ဘက်ခြမ်းပေါ့’’
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သတင်းမှန်တွေကို အချိန်မီ ရလား။ ငလျင်အတွက် ကာကွယ်လေ့ကျင့်ရေး ရှိလား။
“ဒီမှာက သတင်းတိတိကျကျ ပေးတယ်။ နောက်ပြီး အဆောက်အအုံ ပြိုတာမရှိဘူး။ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်အောင် ဆောက်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် ငလျင်လှုပ်ရင် ဘယ်လိုပြေးရမယ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းကို ဘယ်လိုသွားရမယ်။ လမ်းကြောင်းတွကအစ ၃ လတခါ၊ ၄ လတခါ လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်။ စနစ်တကျ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေရှိတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိတယ်။ ပြောရင် နားထောင်တယ်။ အစိုးရကလည်း ဖြစ်သွားတဲ့ နေ့ကစပြီး တနေကုန်ပဲ၊ တီဗီဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် သတင်းတွေ အပြည့်အစုံပေးနေတယ်။ ဂျပန်စကားနဲ့ပဲ။ အင်္ဂလိပ် ပြန်ပေးတာ ချန်နယ် ၁ ပဲ ရှိတယ်’’
ဆက်သွယ်ရေးတွေ ပြတ်တောက်သွားတာ အခု ပြန်ကောင်းသွားပြီလားခင်ဗျ။
“ဖြစ်ခါစတုန်းကပါ။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ ဂျမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ လူတွေက တောက်လျှောက် ခေါ်ကြတာကိုး။ ဂျပန်မှာက Cell ဖုန်းတွေ သုံးတာများတယ်။ တချို့လိုင်းမကောင်းတာတွေက ခုထက်ထိ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီ ၃-၄ ရက်အတွင်း အခြေအနေ ကောင်းလာတယ်’’
ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿာနာက ဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျ။
“ဖူကူရှီးမားက လျှပ်စစ်အဓိကပေးတဲ့ နေရာဆိုတော့ လျှပ်စစ်မီးပြတ်သွားတာရယ်၊ အဲဒီဘက်တွေကို လျှပ်စစ်အများကြီး ပြန်ပေးနေရတာကိုး။ ဂျပန်မှာက လျှပ်စစ်ရထားတွေပဲကိုး။ ရထားက တချို့ဆို ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ထွက်တော့တယ်။ တချို့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းပဲ။ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မသွားနိုင်ဘူး။ တိုကျိုနဲ့ မြောက်ဘက်မှာနော်။ တောင်ဘက်ပိုင်းကတော့ ပြဿနာမရှိဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီးတော့ ဓာတ်ဆီပေါ့၊ ဓာတ်ဆီရဖို့ကို ၂ နာရီလောက် တန်းစီရတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တော့ မပို့နိုင်တော့ဘူးလေ။ တိုကျိုမှာပဲ Cosmo ဆိုတဲ့ ဓာတ်ဆီကုမ္ပဏီကြီး မီးလောင်သွားတာလည်း ပါတယ်။ မြန်မာကိုသွားတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ခတွေ ၃ ဆလောက် တက်သွားတယ်’’
ငလျင်လှုပ်တဲ့ အချိန်မှာ တိုကျိုက လူတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲ။
“လူတွေကတော့ ခြောက်ခြားကုန်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဆောက်အအုံ ပျက်စီးတာ မရှိဘူး။ တိုကျိုမှာ ဆူနာမီမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက လူဦးရေ တအားများတော့၊ လမ်းတွေ ပိတ်လိုက်တော့ ဘူတာမှာ အိပ်ရတာ၊ လမ်းလျှောက်ပြန်ရတာ ရှိတယ်။ ၁ဝ နာရီလောက် ကြာတယ်။ အလုပ်က အချိန်မီလာရတာကိုး။ မနေ့က သတိထားမိတာက ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်နေတယ်။ တချို့ဆို အိပ်မပျော်ဘူး။ တိုက်ခန်းကြီးတွေမှာက မီးပျက်သွားရင် ရေရော၊ ဂတ်စ်ရော မလာဘူး။ ရေတွေ လှောင်ရတယ်။ ဓာတ်ခဲဆို ဝယ်လို့တောင် မရဘူး၊ တန်းစီရတာ။ မီးမလာတော့ ရေခဲသေတ္တာ ပြဿနာတက်တယ်။ လျှပ်စစ်က ပြတ်လိုက်လာလိုက်ပဲ။ သိပ်တော့ ကြာမယ်တော့ မထင်ပါဘူး’’
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်စရာတွေ ဘာများရှိလဲ။
“ဗမာလူမျိုး ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းက တိုကျိုမှာနေသလို အဲဒီနေတဲ့လူရဲ့ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းက ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လုပ်တယ်။ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ညဆိုင်း ညနေ ၅ နာရီလောက်ကနေ ည ၁ နာရီထိ ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေမျိုး တော်တော်များများ မဖွင့်ကြတော့ဘူး။ နေ့လည်သမားက ပိုအလုပ်များလာတယ်။ ရေရှည်မှာ အလုပ်အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်။ လူတွေက ချွေတာလာမယ်ဆို ဒီဆိုင်တွေက ထိခိုက်လာမယ်။ လူတွေက အလုပ်တွေ ပြုတ်လာမယ်။ အရင်တုန်းက အလုပ်ပြုတယ်ဆို ဂျပန်အစိုးရ အန်ဂျီအိုအကူအညီ တောင်းလို့ရတယ်။ အခုက သူတို့လည်း ဒုက္ခရောက်နေတယ်’’
“နှစ်မျိုးရှိတယ်။ တမျိုးက fast food လိုမျိုး။ ဘူးထဲမှာ ထည့်ပြီးသား၊ ရေနွေးထည့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း စားလို့ ရတယ်။ အဲဒါမျိုးက လုံးဝကို မရှိတာ။ အဲဒီကောင်တာတွေ သွားကြည့်ရင် ပြောင်ရှင်းနေရော။ နောက် ဆန်နည်းနည်း ပြတ်တယ်။ ဒီမှာက မနေ့ကရော၊ ဒီနေ့ရော ပိုက်ကလာတဲ့ ရေမှာ ရေဒီယိုအက်တစ်ကြွတာ တွေ့ရတယ်ပြောတယ်။ တိုကျိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုနဲ့ နီးတဲ့ နေရာမှာ။ ဖူကူရှီးမားနားမှာ။ အဲဒီဘက်က ထွက်တဲ့ နို့မှာလည်း ပါတယ်ပြောတယ်။ အဲဒီဘက်က နွားနို့တွေကို ဒီဘက် အလာမခံတော့ဘူး’’
ဂျပန်မှာ ဆူနာမီထိတဲ့ လူတွေအတွက် အလှူငွေကောက်ခံနေတယ် ကြားလို့ပါ။
“ကျနော်တို့ကတော့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအနေနဲ့ပေါ့နော်။ မနေ့ကစပြီးတော့ အလှူငွေ ကောက်ခံတယ်ဗျာ။ စုစုပေါင်း ဂျပန်ယန်းငွေနဲ့ တသိန်းသုံးသောင်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ ကျော်) ပေါ့။ ဒါ တဦးချင်းလှူတာပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ သမဂ္ဂအနေနဲ့လည်း ငွေတော်တော်များများ လှူဖို့ ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့က ဂျပန်သမဂ္ဂကနေတဆင့် လှူမှာပေါ့။ နောက်တခုက ဒီမှာ အဖွဲ့ပေါင်း ၃ဝ ကျော် စုပေါင်းပြီး၊ အလှူငွေ ကောက်ခံပွဲနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကနေတဆင့် လှူဖို့ပေါ့’’
ဘယ်သူတွေကိုလှူမှာလည်း ဂျပန်တွေအတွက်လား၊ မြန်မာတွေအတွက်လားခင်ဗျ။
“သမဂ္ဂကနေတဆင့် လှူမှာဆိုတော့ သူတို့က ဘယ်လိုမူချပြီး လှူမလဲ မသိဘူး။ သူတို့ပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကတော့ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဦးစားပေးမယ်’’
စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား ကြပ်ပြေးဒေသကို နေပြည်တော်ဆိုသော အမည်နှင့် မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် အဆိုပါမြို့သစ်တွင် ရွှေတိဂုံစေတီ ပုံတူ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတဆူကို တည်ထား ကိုးကွယ်လျက်ရှိသည်။
လူ့အသက်လည်း သန်းပေါင်းရာချီ ကြွေခဲ့ပြီ
ဒါပေမဲ့ အကြောက်အလန့် မရှိချင်သေးဘူး
သူ့ကိုယ်သူ ကမ္ဘာလို့်လည်း အသေအချာမသိ
ကမ္ဘာကျင့် ကမ္ဘာကြံ ကြံနေတုန်းပဲ
ဒေါ်လာ (၄၀၀၀) တန်တယ်
“ဆာ”တာဟာ “နာ”တာထက် ဆိုးပါသတဲ့
အစားအသောက်တွေ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ အဆင်သင့်
အထည်အလိပ်တွေ မီးပုံရှို့ပစ်ဖို့လည်း အဆင်သင့်
သူ့အုပ်စု ကိုယ့်အုပ်စု ဖွဲ့နေတုန်းပဲ
လိုအပ်လာ ကိုယ့်အသင်းရှိရာ ပြေးကပ်မယ့်
ဘယ်ခေါင်းမှ မလွတ်တော့။ ။
ပန်းအလင်္ကာမဂ္ဂဇင်းဧပြီ၊ ၂၀၀၇(မိုးဃ်းဇော် စီစဉ်သည့် စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက် ၁၀နှစ်ပြည့်အကြို ခေတ်ပြိုင်ကဗျာရှည်အချို့စာအုပ်မှ…)
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Monday, 21 March 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ကဗျာကဏ္ဍ |
၂၁ ရာစုသို့ စွဲချက်တင်ခြင်း (ကမာပုလဲ )
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လူတစုရဲ့ အတ္တတွေကပဲ
ခုတော့ အပြစ်မဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေကို
အဘယ်သူတွေ ကျိကျိတက် ကြွယ်ဝခဲ့ပါသလဲ
ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မျက်သယံဇာတ၊
မျိုးဗီဇဖျက် အစားအစာများနဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး
ဘယ်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖော်စပ်ပေးလိုက်တာပါလဲ … ။
ငြိမ်းချမ်းရေး … ကို
လူ့အခွင့်အရေး … ကို
ရွှေဖလားရောင် ချိတ်လုံခြည်ကို ၀တ်လို့
ပန်းသွေးရောင် ခေါင်းပေါင်းကို ပေါင်းတယ်၊
ဥရောပ၊ အမေရိကတို့ကို ရောက်ရင်
ကြောင်ကမ္ဘာအကောင်းစား သားရေရှုးဖိနပ်ကို စီးတယ်၊
ကမ္ဘာကြီးဟာ … ခင်ဗျားအတွက်
ဘုမသိ ဘမသိ အေ့စ်ကိုက်နေရရှာတယ်၊
ခင်ဗျား ကမ္ဘာမြေကြီးကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေပုံက
ဝေသာလီ ဂဏ နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့
၀သကာရ အမတ်ကြီးရဲ့ အပြုအမူနဲ့ တထပ်တည်းပဲ၊
သူတပါး မျက်ရည်ကြီးငယ်ကျမှ နေသာထိုင်သာရှိပါသလား
မာဂရက်မစ်ချယ်ရဲ့ဇာတ်လိုက် ‘ရက်ဘတ်တလာ’ ပါပဲ
အကောင်းစား အရက်နဲ့ ဆေးလိပ်ကို သောက်မယ်
အကောင်းဆုံးတွေသာ ခင်ဗျားအတွက် ဖြစ်ရမယ်
အဲဒီနှစ်ချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ် … ဖြစ်တယ် …။
ခင်ဗျားရှိလို့ ပြည်သူတွေ ရှိနေတာလား
ဒါကို ခင်ဗျား စဉ်းစားမိခဲ့ပါရဲ့လား
ခင်ဗျားရဲ့ ပက်ပက်စက်စက် ကျဆုံးခန်းကို
ခင်ဗျားရှေ့က သွားနှင့်သူ ရာစုအဟောင်းအမြင်းတွေက
အိပ်လို့တောင် ပျော်မယ်မထင်ဘူးဗျာ။ ။
အိုင်စတိုင်း - ၂၀ ရာစုရဲ့ ရူပဗေဒပညာရှင်ကြီး
၀သကာရ - ဆရာပါရဂူ ဘာသာပြန် ‘ဝေသာလီ’ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးခဲ့သူ
မာဂရက်မစ်ချယ် - GONE WITH THE WIND (လေရူးသုန်သုန် - ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်) ၀တ္ထု
ရက်ဘတ်တလာ - လေရူးသုန်သုန်ဝတ္ထုထဲမှ ဇာတ်ကောင် (အကျိုးစီးပွားသမား တောကြောင်)
Test of English as Foreign Language( TOFEL)
TOEFL စာမေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ (Test of English as Foreign Language) ကို အင်္ဂလိပ်စာ လိုက်စားတဲ့ သူတွေ၊ နိုင်ငံတကာမှာ အမျိုးမျိုးသော ဘွဲ့တွေ၊ သင်တန်းတွေ အတွက် ကျောင်းသွား တက်ချင်တဲ့သူတွေ၊
တက်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့သူတွေ အားလုံး သိပြီးသား စာမေးပွဲတစ်ခုပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူး ဂျာစီပြည်နယ်၊ ပရင်စတန်မြို့ အခြေစိုက် ETS လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ ပညာရေးအဖွဲ့ ကြီးကနေ စစ်ပေးတဲ့ စာမေးပွဲတွေ ထဲကမှ နိုင်ငံတကာကျောင်း ၀င်ခွင့်လျှောက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းအတွက် စစ်ပေး တဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ TOEFL စာမေးပွဲနဲ့အပြိုင် ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ နောက်တစ်ခုကတော့ ဗြိတိသျှကောင်စီကနေ တာဝန်ယူပြီး စစ်ပေးနေတဲ့ IELTS စာမေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲနှစ်ခုလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ပေးကြပေမယ့် စစ်ဆေးပုံ နည်းစနစ်ကတော့ အစစ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ စာမေးပွဲ နှစ်ခုလုံးရဲ့ ရမှတ် (Score) တွေကိုတော့ နိုင်ငံတကာက တက္ကသိုလ်တိုင်း လိုလိုက ၀င်ခွင့် အရည်အချင်းအတွက် လက်ခံပေးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ TOEFL စာမေးပွဲအကြောင်းနဲ့ ဒီစာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာလေးတွေ အကြောင်း ပြောပါရစေ။
ဘယ်စာမေးပွဲပဲဖြေဖြေ၊ စာမေးပွဲတစ်ခုကို ဖြေမယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး လုပ်ရတဲ့အလုပ်က စာမေးပွဲစစ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ သဘောသဘာဝ တွေကို ဦးစွာ နားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ TOEFL စာမေးပွဲတွေကို ဖြေဆိုရာမှာ Internet Based Test (iBT), Computer Based Test နဲ့ Paper Based Test ဆိုပြီး ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့ စစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Paper Bast Test တစ်မျိုးပဲ ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် Paper Bast Test ဖြေလို့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေ အချို့အတွက်ကတော့ ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ စာမေးပွဲ ငါးကြိမ် ရှိပါတယ်။ Internet Based Test (iBT), Computer Based Test ကတော့ ကွန်ပျူတာကို အခြေခံပြီးစစ်တဲ့ စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးတာရော၊ ဖြေတာရော ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲ ဖြေရတဲ့ စနစ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြေလို့ရတဲ့ Paper Based Test စာမေးပွဲကတော့ မေးခွန်းကို စာရွက်နဲ့ လာပြီးတော့ အဖြေလွှာကို ခဲတံနဲ့ ဖြေပြီး ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ စနစ်ပါ။ အခြား စနစ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ စာမေးပွဲ စစ်ပုံချင်း ကွဲပြားခြားနားတာနဲ့အမျှ အမှတ်ပေးပုံ Scoring System ကလည်း ကွဲပြားသွားပါတယ်။
Paper Based Test စာမေးပွဲကို အဓိက ဖြေလို့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဇန်န၀ါရီ၊ မတ်လ၊ မေလ၊ သြဂုတ်နဲ့ နိုဝင်ဘာလတွေမှာ ဖြေလို့ရနိုင် ပါတယ်။ စာမေးပွဲအတွက် အချိန်တွေ သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ကျောင်းဝင်ခွင့် ကိုယ်လျှောက်မယ့် နောက်ဆုံးရက်ရယ်၊ ကိုယ့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အချိန်တွေနဲ့ ချိန်ထိုးပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက TOEFL စာမေးပွဲတွေကို USIS က ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးပေမယ့် စာမေးပွဲကြေး ဒေါ်လာ ၁၅၀ ကိုတော့ IELTS စာမေးပွဲကြေးလို ရန်ကုန်မှာ သွင်းလို့မရဘဲ သတ်မှတ် ထားတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးဂျာစီ ပြည်နယ်၊ ပရင်စတန်မှာ ရှိတဲ့ ETS ကို တိုက်ရိုက် ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အချိန်ကနေ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ အချိန်ကျမှ ကိုယ့်ရဲ့ Score ကို ကိုယ်လျှောက်တဲ့ ကျောင်းကို ပို့ပေးတဲ့ စနစ်ဖြစ်လို့ ၀င်ခွင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Score ရောက်မယ့် အချိန်ရယ်၊ ကျောင်း ၀င်ခွင့် လျှောက်လွှာတင်ရမယ့် နောက်ဆုံးရက်နဲ့ ရယ်ကို ချိန်ထိုးပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါက ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြေမယ့် စာမေးပွဲက ဘယ်လို ပုံစံမေးတာလဲ၊ ဘယ်နှပိုင်းရှိသလဲ၊ သတ်မှတ် အချိန် ဘယ်လောက်လဲ စတာတွေကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ TOEFL စာမေးပွဲဟာ သာမန် အားဖြင့် အရေး၊ အဖတ်၊ နားထောင်စွမ်းရည် တွေအပြင် အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါတွေကို မေးခွန်း အပိုင်းလိုက် မေးတဲ့စနစ်နဲ့ ကျင့်သုံးပါတယ်။ ပထမအပိုင်းက အချိန်နာရီဝက်ပေးပြီး ခေါင်း စဉ်တစ်ခုပေးပြီး စာစီစာကုံးပုံစံမျိုးရေးရတဲ့ Test of Written English (TWE) လို့ဆိုတဲ့ ရေးဖြေ အပိုင်းကို ဖြေရပါတယ်။
ပြီးမှ TOEFL စာမေးပွဲ အဓိကအပိုင်းကို ဆက်ဖြေကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း TWE စာမေးပွဲကို နောက်မှ ဖြေရပြီး အဓိက အပိုင်းကို နောက်မှ ဖြေရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံး နားထောင် တဲ့အပိုင်း (Listening) ကို အရင်ဖြေရပါတယ်။ မေးခွန်း စုစုပေါင်း ၅၀ အတွက် ဖြေဆိုချိန် မိနစ် ၃၀-၄၀ လောက်ရှိပြီးတော့ အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲမေးထားပါတယ်။ ဒုတိယ အပိုင်းကတော့ သဒ္ဒါနဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း တွေကိုစစ်တဲ့ (Structure and Written Expre ssion) အပိုင်းဖြစ်ပြီး မေးခွန်း ၄၀ အတွက် ဖြေဆိုချိန် ၂၅မိနစ်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ အဖတ်စွမ်းရည်ကိုစစ်တဲ့ (Reading Comprehension) အပိုင်းပါ။ စာပိုဒ် အတို ငါးပုဒ်အတွက် မေးခွန်းပေါင်း ၅၀ ဖြေရပြီး ဖြေဆိုချိန် ၅၅ မိနစ် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြေဆိုချိန် စုစုပေါင်း ၂း၃၀ နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြေရတဲ့ TOEFL အနေနဲ့ Speaking Test မရှိသေးတဲ့ အတွက် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေဖို့ မလိုပါဘူး။
အမှတ် Score ဘယ်လောက်ရဖို့ လိုအပ်သလဲ...
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့် ကျောင်းအတွက် အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ TOEFL Score က
ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သိဖုိ့ပါပဲ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ
အားစိုက်ထုတ် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်မလဲ ဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတွေမှာ တောင်းတဲ့ Score က ဘွဲ့လွန်သင်တန်းအတွက် တောင်းတဲ့
Score ထက် နည်းနေလေ့ ရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်း ဆိုနိုင်ပေမယ့်လည်း
ကျောင်းအလိုက်၊ ကိုယ် တက်မယ့် ဘာသာရပ်အလိုက် Score လိုအပ်ချက်တွေကတော့
အနည်းနဲ့ အများ ကွာခြားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘွဲ့ကြို သင်တန်းတွေဆိုရင် Paper
Based Test အတွက် လိုအပ်တဲ့ Score အနေနဲ့ ဘာသာရပ်အလိုက်၊ ကျောင်းအလိုက်
၅၅၀ ကနေ ၆၀၀ အတွင်းမှာ တောင်းလေ့ရှိပြီး ဘွဲ့ လွန်သင်တွေအတွက်ကတော့ ၅၈၀
နဲ့ ၆၀၀ အထက်ကို တောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အခြား TOEFL တွေ ဖြစ်တဲ့ IBT နဲ့ CBT
တွေအတွက် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဖြေမယ့်သူတွေနဲ့ အကျုံးမ၀င်လို့
မပြောတော့ပါဘူး။ ကျောင်းတွေ အနေနဲ့ကတော့ TOEFL Score အပြင် Writing Skills
စာမေးပွဲရလဒ်ဖြစ်တဲ့ TWE ရလဒ်တွေကို လည်း အလေးထားကြည့်လေ့ ရှိတာကြောင့်
TOEFL ဖြေသူတွေအနေနဲ့ စာမေးပွဲအတွက် ပြင် ဆင်ရာမှာ Essay ပုံစံမျိုး
ရေးရတဲ့ TWE စာမေး ပွဲကိုလည်း အလေးထားဖို့ လိုပါတယ်။
TOEFL စာမေးပွဲရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက ပညာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ
ကျောင်းတက်မယ့် သူတွေအတွက် ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
အရည်အချင်း စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲဖြစ်တဲ့ အတွက် မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ
ပညာရေးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မူတည်ပြီး မေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မေးခွန်းတွေ အနေနဲ့ကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ် တတ်ကျွမ်းမှုကို ဦးတည်စစ်တဲ့
စာမေးပွဲဖြစ်ပေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေ
ဖြစ်လေတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်
မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ပန်း ရှုံးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နားထောင်တဲ့ စွမ်းရည် (Listening) နဲ့ အဖတ် စွမ်းရည် (Reading) မှာ
မေးတဲ့မေးခွန်းတွေမှာ ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ပေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ
ဘာသာ ရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေ ဆိုတာကို သိသိ သာသာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် TOEFL ဖြေမယ့်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ စာမေးပွဲအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ
ပြင်ဆင်ရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဒ္ဒါအပါအ၀င်အခြားလိုအပ်တဲ့ စကားလုံး
အသုံးအနှုန်းပိုင်းတွေနဲ့ နားထောင်တဲ့ အပိုင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ထားရမှာ
ဖြစ်သလို ပညာရပ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသားတွေလည်း တတ်နိုင်သလောက်
ရှာဖွေ ဖတ်ရှုထားနိုင်ရင် အတော်လေး အထောက်အကူပြုပါမယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ စွယ်စုံ ကျမ်းတွေ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေ၊ သုတေသန
ဆောင်းပါးတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ စာတမ်းတွေကို ဖတ်တဲ့ အလေ့အထလေး ရှိသင့်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံပြီး မေးတတ်တဲ့ TOEFL
စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိမ်းသက်သက် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
TOEFL စာမေးပွဲရဲ့ မေးခွန်းပုံစံဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာကျောင်းသားတွေ အပေါ်
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် မေးခွန်းလို့ခေါ်တဲ့ Objective Type ဖြစ်ပါတယ်။ မှားမှန်ရောထွေး
အမှန်ရွေးပုံစံမျိုးပါ။ ဒါကြောင့်လည်း TOEFL စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုဖို့
ပြင်ဆင်ရာမှာ သင်တန်းတက်တာအပြင် ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့ကျင့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကုမ္ပဏီမျိုးစုံက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ
ပေါင်းစုံအပြင် စီဒီတွေကိုပါ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ဈေးအသင့် အတင့်နဲ့
အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ TOEFL စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူတွေအနေနဲ့
ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ရာမှာ စာမေးပွဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်း
လေ့ကျင့်ရင် အကောင်း ဆုံးပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် သာမန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ
လုပ်တာမျိုးထက် စာမေးပွဲမှာလို အချိန် သတ်မှတ်ပြီး စာမေးပွဲ
ဖြေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စာမေးပွဲနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ဖြစ်ပြီးသား
ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ရာမှာ စာအုပ်ကို အစဉ်လိုက်
လေ့ကျင့်တာထက် အခက်ဆုံးလို့ ထင်တဲ့အပိုင်းကို ရွေးပြီး ဖြေနိုင်ရင်
ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ စာရေးသူ အတွေ့အကြုံအရ အကြံပေးချင်တာကတော့
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ TOEFL စာမေးပွဲတွေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အမှန်တကယ်ဖြေရတဲ့
TOEFL စာမေးပွဲထက် ပိုလွယ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်
လေ့ကျင့်ရာမှာလည်း စာအုပ်တစ်မျိုး တည်း ဦးတည်ပြီး လေ့ကျင့်တာထက်
ဖြစ်နိုင်ရင် ရနိုင်သလောက် စာအုပ်များများကို လေ့ကျင့် နိုင်ရင်
TOEFL စာမေးပွဲဆိုတာက တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ် ကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ဆေးတာ မှန်ပေမယ့် Score အကောင်းဆုံး
ရဖို့အတွက် အင်္ဂင်္လိပ်စာ အရည်အချင်းကောင်း ရှိဖို့လိုတဲ့ အပြင် စာမေးပွဲနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ ချဉ်းကပ်ပြင်ဆင်မှု (Exam Approach) ကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲအထာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ရှိနိုင်ဖို့ရာမှာ TOEFL စာမေးပွဲအတွက်
စနစ်တကျနဲ့ သင်ပေးနိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာတွေထံမှာ သင်တန်း တက်နိုင်ရင်
ပိုကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေနဲ့ သိပ်ပြီး
အကျွမ်းတ၀င် မဖြစ်တဲ့ စာမေးပွဲစနစ် ဖြစ်လေတော့ စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့
စနစ်တကျ သင်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာ သင်တန်းတက်တာဟာ ကိုယ့် အတွက် အထောက်အကူ
ကောင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါမှာ
သိချင်တာ ရှိတာတွေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာလို့ မရတာတွေကို ကျွမ်းကျင်တဲ့
ဆရာတွေဆီမှာ မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် အချိန်ကုန် သက်သာပါတယ်။ တစ်ခါတလေ
စာမေးပွဲမှာ သိသင့်တဲ့ အထာလေးတွေ၊ လုပ်သင့်တာလေး တွေကိုလည်း သိနိုင်တာမို့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုး ရှိသွားတာ လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
ဒီနေရာမှာ တွေ့ရတာလေးကို ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံက ဖြေတဲ့သူ အတော်များများက
ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ထက် ဆရာတွေကို အားကိုးလွန်းပြီး ကျူရှင်တွေ
တစ်ခုပြီး တစ်ခုလိုက် တက်ရင်းနဲ့ပဲ လိုအပ်တဲ့ Score မရနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေ
သူတွေလည်း အတော်အတန် ရှိနေပါတယ်။
မေးခွန်းအမျိုးအစားက ဆိုခဲ့သလိုပဲ မှားမှန် ရောထွေး အမှန်ရွေးဆိုတော့ အဖြေက ပေးထားပြီးသားပါ။
အဖြေမှန်တစ်ခုနဲ့ မမှန်တဲ့ အဖြေ သုံးခု ရောထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့်
စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဖြေနိုင်တာတွေကို ဖြေသလို မဖြေနိုင်တာ၊ မသိတာ၊
မသေချာတာ တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံးမှာ မှန်းပြီး ထည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
အဖြေမှားတွေအတွက် မှန်လို့ရတဲ့ ရမှတ်ထဲကနေ အမှတ် မလျှော့ပါဘူး။
မှန်းထည့်လိုက်တဲ့ အဖြေက မှန်နေရင်လည်း အမြတ်ပေါ့။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ မရတဲ့
မေးခွန်း တွေကို ချန်ထားလိုက်ရင် အဲဒီအတွက် လုံးဝ အမှတ်မရဘဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပထမဦးဆုံး နားထောင်မှုစွမ်းရည် (Listening) ကိုစစ်တဲ့
မေးခွန်းအကြောင်းလေး ပြောပါရစေ။ အခြေအနေ တစ်ခုမှာ ပြောနေတဲ့ Dialogue
ဖွင့်ပြပြီးတော့ အဖြေလွှာပေါ်မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အမှန်ဆုံးအဖြေကို
သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း ရွေးရပါတယ်။ သတ်မှတ်ချိန် ပြည့်သွားရင်
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုအတွက် Dialogue တစ်ခု ထပ်ထွက် လာပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို
ဖြေဆိုရာမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် Dialogue မစခင် (လေးငါးစက္ကန့်လောက်
ရှိမယ်ထင်တယ်) အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ပေးထားတဲ့
အဖြေတွေကို ဖတ်ထားနိုင်ရင် အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကနေတစ်ဆင့် Dialogue
က ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကို မေးမှာလဲ ဆိုတာမျိုးကို မှန်းကြည့်လို့
ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း Dialogue ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ အနီးစပ်ဆုံး အဖြေကို
ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့ အခါမှာလည်း ကက်ဆက်ကို စာမေးပွဲမှာလိုပဲ တစ်ခေါက်ပဲဖွင့်ပြီး အခုပြောခဲ့တဲ့ အဖြေရှာတဲ့
ပုံစံမျိုးကို သေသေ ချာချာ လေ့ကျင့်ထားနိုင်ရင် အတော်အဆင် ပြေနိုင်ပါတယ်။
Listening မေးခွန်းတွေကို ဖြေရာမှာ အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ မေးခွန်း
တစ်ခုရဲ့ အဖြေကို ကိုယ်က စဉ်းစားလို့ မပြီးခင်မှာ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကို
တစ်ခုအတွက် Dialogue ဖွင့်ပြပြီဆိုရင်တော့ လက်ရှိ စဉ်းစား လက်စကို
သံယောဇဉ်ဖြတ်ပြီး နောက် မေးခွန်း အတွက် အာရုံစိုက်ပေတော့ပဲ။
အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ မေးခွန်းတွေ အကုန်လွတ်ကုန်ပြီး သေသေချာချာ
TOEFL ဖြေတဲ့သူတွေအတွက် Listening အပိုင်းပြီးရင် ဖြေရတဲ့အပိုင်း ကတော့ Structure and Written Expression
အပိုင်းပါ။ ဒီအပိုင်းမှာ အများ အားဖြင့် အမှတ်လျော့လေ့ ရှိတယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ ဖြေတဲ့သူ အတော်များ များကလည်း အခက်ဆုံးလို့ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ါရင့် TOEFL သင်တဲ့ ဆရာ တစ်ဦးပြောဖူးတာကတော့
အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါနဲ့ အသုံးတွေကို ကြေညက်အောင် လေ့လာတာရယ်၊
လေ့ကျင့်ခန်းများများ လုပ်တာကလွဲရင် အခြား နည်းမရှိလို့ ဆိုပါတယ်။
Read more: Test of English as Foreign Language( TOFEL) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/test-of-english-as-foreign#ixzz1HFJRMVZw
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Sunday, 20 March 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ TOEFL နှင့် IELTS |